Maxkamada Yurub oo fiirineyso kiiska hooyo soomaali ah oo Norway ay rabto inay tarxiisho. - NorSom News
Maxkamada Yurub oo fiirineyso kiiska hooyo soomaali ah oo Norway ay rabto inay tarxiisho.
Maxkamada Sarre ee dalkan Norway ayaa bishii Desember ee sanadkii tagay aqbashay kiiska tarxiilka hooyo soomaali ah oo lagu magacaabo Yaasmiin Kristensen, kadib markii ay UDI-du go´aamisay in dalka laga musaafuriyo. Halkan kasii akhri.
Yaasmiin Kristensen oo ah hooyada afar caruur ah ayaa lagu heystaa inay ka beensheegtay aqoonsigeeda shaqsiyeed, iyada oo sheegatay inay kasoo jeedo dalka Soomaaliya, halka asal ahaan ay ka timid dalka Jabuuti. Waxeyna Norway timid mudo 20 sano ku dhow kahor.
Hey´adda Qoxootiga Norway ayaa Yaasmiin ka celisay sharciga dhalashada, waxeyna amartay inay dalka ka baxdo mudo labo sano ah, kadibna ay dib usoo dalbato inay qoyskeeda iyo ninkeeda la midowdo.
Qareenka hooyadan soomaalida ah, Arild Humlen ayaan ku qancin kiiska maxkamada sare, wuxuuna codsi ah inay kiiskaas fiiriso uu u diray maxkamada xuquuqul insaanka Yurub.
Maxkamada xuquuqul insaanka Yurub ayaa hada go´aamisay inay fiiriso kiiska hooyadan soomaalida, iyada oo ay hada dhici karto inay kiiskaas dhageysato.
Kiiska hooyadan soomaalida ah ayaa caan ka ah warbaahinta Norway, waxaana kiiskeeda taageersan siyaasiyiin caan oo badan iyo waliba wasiiro dowlada Erna Solberg katirsan.
Xigasho/kilde: Menneskerettsdomstolen plukker opp norsk utvisningssak.
Previous articleWadamada Yurub oo gacmaha u taaganayo Shiinaha.
Next articleHal isbuuc: 114.000 qof oo NAV lacag dagpenger ka codsaday.